နိုင်ငံတကာပါလီမန်များအဖွဲ Inter-Parliamentary Union (IPU) က ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဒီမိုကရေစီနေ့ အတွက် IPU ပြန်ကြားရေးဌာနမှ ထုတ်ပြန်သော သတင်းလွှာ
ဒီမိုကရေစီအတွက် လူငယ်တို့၏ စွမ်းအားကို အသုံးပြုရန် နိုင်ငံတကာပါလီမန်များအဖွဲ့ Inter-Parliamentary Union(IPU) က တိုက်တွန်းခြင်း
၁။ ဒီမိုကရေစီထွန်းကားရေးအတွက် နိုင်ငံ၏အရေးအရာများကို လက်တွေ့ အဆုံးအဖြတ် ပေးသည့် နိုင်ငံရေးလုပ်ငန်းများတွင် လူငယ်တို့၏စွမ်းအား ကိုအသုံးပြုရန် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံတိုင်းတွင် လိုအပ်လျက် ရှိသည်ဟု IPU က ပြောကြားသည်။
၂။ (၁၅-၉-၂၀၁၄) ရက်နေ့တွင်ကျရောက်မည့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဒီမိုကရေစီနေ့ကို ကြိုဆိုသည့် အနေဖြင့်ကမ္ဘာတစ်ဝန်းရှိ နိုင်ငံ့အရေးကိစ္စများနှင့် ကင်းကွာနေသော လူငယ်များအားနိုင်ငံရေးဆိုင်ရာ ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်သည့် လုပ်ငန်းတွင်ပါဝင်လာ စေရေးအတွက် ပြည်သူများသည် မိမိတို့၏အတွေး အခေါ်များကို ပြတ်သားစွာပြောင်းလဲကြရန် လိုအပ်သည်ဟု IPU က တိုက်တွန်းသည်။
၃။ လူငယ်သည် အနာဂတ်နှင့်အမြဲဆက်စပ်လျက်ရှိသည်။ လူငယ်တို့သည် အနာဂတ်ကိုဖန်တီး နိုင်သောစွမ်းအား ရှိသည့်အပြင် ပစ္စုပ္ပန်ကာလတွင် ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်နိုင်သည့် စွမ်းအားလည်း ရှိသည်ဟု IPU ဥက္ကဋ္ဌ Mr. Radi က ပြောကြားသည်။ လူငယ်အများစုသည် နိုင်ငံရေးဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ် သည့်လုပ်ငန်းနှင့် ကင်းကွာလျက်ရှိပြီး ဤအခြေအနေကို ပြောင်းလဲပစ်ရန် လိုအပ်သည်။
၄။ ကမ္ဘာ့လူဦးရေ၏ ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းသည် အသက် ၁၅ နှစ်မှ ၂၅ နှစ်ကြားရှိလူငယ်များဖြစ်ကြ သည်။ သို့သော်မကြာမီကပြုလုပ်ခဲ့သော IPU သုတေသနပြုလုပ်ချက်အရ အသက် ၃၀ အောက်ရှိ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးရေသည် ကမ္ဘာပေါ်ရှိ စုစုပေါင်းလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်ဦးရေ၏ ၂ ရာခိုင်နှုန်းအောက် လျော့နည်းနေကြောင်းတွေ့ရှိရသည်။ အသက် ၂၀ နှစ်နှင့် ၄၀ နှစ်ကြားရှိလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်ဦးရေသည် ကမ္ဘာ့စုစုပေါင်း လွှတ်တော်ကိုယ်စား လှယ်ဦးရေ၏ ၁၂ ရာခိုင်နှုန်းသာရှိ ကြောင်းတွေ့ရှိရသည်။
၅။ နိုင်ငံများစွာ၌မဲပေးခွင့်ရှိသည့် အနိမ့်ဆုံးအသက်နှင့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ရွေးကောက်ခံ ပိုင်ခွင့်ရှိသည့် အနိမ့်ဆုံးအသက်တို့အကြား၌ ကွာဟမှုရှိနေသည်။ ဤအချက်သည်လူငယ်ဦးရေများ စွာရှိသည့်နိုင်ငံတစ်ခု၌ “ လွှတ်တော်က လူထုအားကိုယ်စားပြုမှု” အပေါ် တိုက်ရိုက်အကျိုးသက် ရောက်စေသည်။ နိုင်ငံများစွာ၌ မဲပေးခွင့်ရှိသည့် အနိမ့်ဆုံးအသက်သည် ၁၈ နှစ်ဖြစ်ပြီးရွေးကောက်ခံ ပိုင်ခွင့်ရှိသည့် အနိမ့်ဆုံးအသက်သည် ၂၂ နှစ်နှင့် အထက်ဖြစ်သည်။ မည်သို့ဖြစ်စေ၊ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအရေ အတွက်၏ သုံးပုံတစ်ပုံတွင် ရွေးကောက်ခံပိုင်ခွင့်ရှိသည့် အနိမ့်ဆုံးအသက်သည် ၂၅ နှစ်နှင့်အထက် ဖြစ်သည်။
၆။ ကမ္ဘာပေါ်ရှိဒေသအားလုံး၌ ရွေးကောက်ပွဲများတွင် မဲပေးသည့်လူငယ်ဦးရေသည် နှစ်စဉ်ကျဆင်း လာလျက်ရှိသည်။ အသက်၃၅နှစ်အောက်ရှိ လူငယ်ဦးရေသည် စုစုပေါင်းလူဦးရေ၏ ၆၅ ရာခိုင်နှုန်း ရှိသည့် အာဖရိကတိုက်တွင် မဲပေးသည့် လူငယ်ဦးရေကျဆင်းလာမှုနှင့် နိုင်ငံရေးဆန္ဒဖော်ထုတ်ပွဲ များ၌ လူငယ်များပါဝင်မှုလျော့ကျလာခြင်းတို့ကို စိုးရိမ်ဖွယ် တွေ့ရှိနေ ရသည်။
၇။ ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ်နောက်ပိုင်းတွင် ကမ္ဘာ့ပျမ်းမျှအားဖြင့် ရွေးကောက်ပွဲတွင် မဲပေးသည့်လူငယ် ဦးရေကျဆင်းလာခဲ့သော်လည်း ဒီမိုကရေစီအရေးနှင့်လူမှုစီးပွားရေးဆိုင်ရာ အခွင့်အရေးများအတွက် မကြာမီကပြုလုပ်ခဲ့သည့် လူထုလှုပ်ရှားမှုများတွင် လူငယ်များသည် ရှေ့တန်းမှပါဝင်ခဲ့ကြသည်။ထို လှုပ်ရှားမှုများအနက်မှ တစ်ခုမှာအာရပ်နွေဦးလှုပ်ရှားမှု ဖြစ်သည်။ လူငယ်တို့၏ ပြောဆိုချက်များကို လူအများက ကြားသိနိုင်ရန်အတွက် လူမှုကွန်ယက်မီဒီယာ (social media) ကို အသုံးပြုခြင်းသည် ပြောင်းလဲမှုဖြစ်ပေါ်ရေးအတွက် အဓိကကျပြီးကြီးထွားလာလျက်ရှိသည့် တွန်းအားတစ်ရပ်ဖြစ်သည်။
၈။ သို့သော်လည်းလူငယ်များသည် နိုင်ငံရေးစည်းဝိုင်း၏ အစွန်အဖျားတွင်သာရှိနေခဲ့ပြီး နိုင်ငံရေးလုပ်ငန်းနယ်ပယ်အတွင်းသို့ ရောက်ရှိလာအောင် အရေးတကြီး ကြိုးပမ်းမှုမျိုး မရှိခဲ့ပါ။
၉။ လူငယ်များအနေဖြင့် နိုင်ငံရေးလုပ်ငန်းများတွင် ပိုမိုပါဝင်လာစေရန် တွန်းအားပေးသည့် လုပ်ဆောင်ချက်များကို IPU က ထောက်ခံအားပေလျက်ရှိပါသည်။ အဆိုပါကြိုးပမ်းချက်များတွင် မဲပေးခွင့်ရှိသည့် အနိမ့်ဆုံးအသက်နှင့် ရွေးကောက်ခံပိုင်ခွင့်ရှိသည့် အနိမ့်ဆုံးအသက်တို့ကို တစ်ပြေးညီဖြစ်စေရေး၊ ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေများတွင် လူငယ်လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များ ပါဝင်ရမည့် အရေအတွက်ကို သတ်မှတ်ပေးရေး၊ စာသင်ကျောင်းများတွင် နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာနှင့် ပြည်သူ့နီတိ ပညာပေးရေးတို့ကို သင်ကြားပေးရန် ပါဝင်သည်။
၁၀။ နိုင်ငံရေးပါတီများသည်လည်း အထက်ပါလုပ်ငန်းများတွင် အလားတူအရေးပါသော ကဏ္ဍမှ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်သည်။ အထက်ပါအချက်များကို ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းဖြင့် နိုင်ငံရေး၌ လူငယ်များ၏ စိတ်ပါဝင်စားမှုကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်မည် ဖြစ်သည်။
၁၁။ လူငယ်များ၏စွမ်းအင်၊ အမြော်အမြင်နှင့် ယုံကြည်ချက်ခိုင်မာမှုတို့ကို ဒီမိုကရေစီရှင်သန်ရေး၊ အပြုသဘောဆောင်သည့် ပြောင်းလဲမှုများဖြစ်ပေါ်လာရေးအတွက် အသုံးချရန် လိုအပ်သည်ဟု IPU ဥက္ကဋ္ဌကတိုက်တွန်းသည်။ ဒီမိုကရေစီဟူသည်မှာ လူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုရှိ လူအားလုံး၏ဆန္ဒသဘောထား များကိုဖော်ပြချက်ဖြစ်ရမည်။ ထိုသို့မဟုတ်ပါက ဒီမိုကရေစီသည်အဓိပ္ပါယ်ကင်းမဲ့သွားမည်။ လူငယ် များအားနိုင်ငံရေးပါတီများတွင် ပါဝင်လာစေရေး၊ လွှတ်တော်များနှင့် အစိုးရအဖွဲ့တို့တွင် ပိုမိုပါဝင် လာနိုင်ရေးတို့ကို ဆောင်ရွက်ပေးရန် လိုအပ်သည်။
၁၂။ မကြာမီက ပြင်သစ်နှင့် အီတလီတို့တွင် အစိုးရအဖွဲ့ထဲ၌ လူငယ်များအား ရွေးချယ်ခန့်ထားခဲ့ ခြင်းသည် နမူနာကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
၁၃။ “ လူငယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များဖိုရမ် ” ကို အဖွဲ့ဝင်ပါလီမန်ပေါင်း ၁၆၄ ခုပါဝင်သည့် IPU အဖွဲ့က ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင်စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ရည်ရွယ်ချက်မှာ အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာနှင့် နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာ ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်း လုပ်ငန်းတွင် လူငယ်များပါဝင်လာကြရန် ဖြစ်သည်။
၁၄။ “ လူငယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ ပထမအကြိမ်ကမ္ဘာ့လုံးဆိုင်ရာကွန်ဖရင့်” ကို ဂျီနီဗာ မြို့၌ (၁၀-၁၀-၂၀၁၄) မှ (၁၁-၁၀-၂၀၁၄) အထိ ကမ္ဘာအနှံ့ဖွံ့ဖြိုးမှုအကူအညီ(Worldwide Support for Development)အဖွဲ့၏ပံ့ပိုးမှုဖြင့် ကျင်းပမည်ဖြစ်ပါသည်။
၁၅။ ရည်ရွယ်ချက်မှာ နိုင်ငံရေးလုပ်ငန်းတွင် လူငယ်များပါဝင်ဆောင်ရွက်မှုကို တိုးမြှင့်နိုင်ရန် အတွက် နည်းလမ်းများကို ရှာဖွေရန်ဖြစ်သည်။ အထက်ပါဖိုရမ် နှင့် ကွန်ဖရင့် တို့သည် လူငယ် ရေးရာနှင့် နိုင်ငံရေးတို့တွင် IPU အနေဖြင့် ပိုမို၍ တာဝန်ယူမှုကို ဖော်ညွှန်းသည့်ပထမဆုံး ခြေလှမ်းများ ဖြစ်ကြသည်။
IPU’s News Release for International Day of Democracy 2014
Geneva,5September 2014
“The energy, vision and beliefs of young people have to be harnessed if democracy is to live up to its name and beathriving force for positive change,” President Radi urges.
“Democracy is nothing if not an expression of all voices in society. We must do what it takes to get more young people into political parties, into parliament, into government – now.”
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် နာယက အမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ မန်းဝင်းခိုင်သန်း Universal Peace Federation (Asia) မှ UPF...